J ကို Neurosci ။ ၂၀၀၈ အောက်တိုဘာ ၈ ရက်၊ 2008 (8): 28-41 ။ Doi: 10272 / JNEUROSCI.10277-10.1523 ။
keywords: အပြုအမူ, နျူကလိယ Accumbens, အဝလွန်ခြင်း, ဆုကြေး, လိင်, Sucrose, ကူးယူအချက်
ΔFosBတစ် Fos မိသားစုကူးယူအချက်သည်တစ်ဦးခြင်းကိုထုတ်ကုန်ဖြစ်ပါတယ် fosB မျိုးဗီဇ (Nakabeppu နှင့် Nathan, 1991) ။ ဒါဟာစူးရှသောလှုံ့ဆော်မှုတုံ့ပြန်အခြား Fos မိသားစုပရိုတိန်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါအတော်လေးနိမ့်အဆင့်ရှိပါကြောင်း, ဒါပေမယ့်သူ့ရဲ့ထူးခြားတဲ့တည်ငြိမ်မှုကြောင့်နာတာရှည်ဆွ (တွေ့မြင်ပြီးနောက်ဦးနှောက်ထဲမှာမြင့်မားဖို့စုဆောင်းနေသည် Nestler, 2008) ။ ဤသည်စုဆောင်းခြင်း (ပြန်လည်သုံးသပ်တွေ့အလွဲသုံးစားမှု, သိမ်းယူမှု, လက္ခဏာမူးယစ်ဆေးဝါး, antipsychotic မူးယစ်ဆေးဝါး, အာရုံခံတွေ့ရှိရပါသည်၏မူးယစ်ဆေးဝါးနာတာရှည်အုပ်ချုပ်ရေးအပါအဝင်နာတာရှည်ဆွများစွာသောအမျိုးအစားများ, နှင့်စိတ်ဖိစီးမှုများအများအပြားအမျိုးအစားများကိုတုန့်ပြန်နေတဲ့ဒေသ-တိကျတဲ့ထုံးစံ၌ဖြစ်ပေါ် Cenci, 2002; Nestler, 2008).
ΔFosBသော induction ၏အလုပ်လုပ်တဲ့အကျိုးဆက်များအကောင်းဆုံး, အနျူကလိယ accumbens (NAc) တွင်အထင်ရှားဆုံးအလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးလုံးဝနီးပါးအားလုံးအမျိုးအစားများကိုအစီရင်ခံတဲ့တုံ့ပြန်မှုပရိုတိန်းသွေးဆောင်ရသောအလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါး, အဘို့နားလည်သဘောပေါက်ကြသည် (ကြည့်ရှု McDaid et al ။ , 2006; Muller နှင့် Unterwald, 2005; Nestler, 2008; Perrotti et al ။ , 2008) ။ အဆိုပါ NAc အဆိုပါ ventral striatum ရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးနှိပ်စက်မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏အကြိုးလုပ်ဆောင်ချက်များအတွက်အရေးပါတဲ့အာရုံကြောအလွှာဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်သက်သေအထောက်အထားတိုးပွားလာဤဒေသတွင်ΔFosBသော induction အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏အကြိုးသက်ရောက်မှုတစ်ခုတိရိစ္ဆာန်ရဲ့ sensitivity တိုးပွါးနှင့်လည်းသူတို့ကိုရရှိရန်လှုံ့ဆျောမှုတိုးမြှင့်စေခြင်းငှါအကြံပြုထားသည်။ ထို့ကြောင့် NAc အတွက်ΔFosB၏ overexpression (အနိမ့်မူးယစ်ဆေးဆေးများမှာ, ကိုကင်းဖို့ဒါမှမဟုတ်မော်ဖင်းအကိုက်ဖို့, ဒါမှမဟုတ် Self-စီမံခန့်ခွဲကင်းဖို့ရာအရပျဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့တိရိစ္ဆာန်များကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်နှင့်တိုးတက်သောအချိုးပါရာဒိုင်းအတွက်ကင်းဘို့ကိုနှိပ်လီဗာပိုကောင်းစေပါတယ်Colby et al ။ , 2003; Kelz et al ။ , 1999; Zachary et al ။ , 2006).
မူးယစ်ဆေးဆုလာဘ်ဖြန်ဖြေအတွက်၎င်း၏အခန်းကဏ္ဍမှထို့အပြင် NAc သဘာဝကဆုလာဘ်မှတုံ့ပြန်မှုကိုထိန်းညှိ်ပတ်သက်နေလျက်ရှိသည်နှင့်မကြာသေးမီအလုပ်အဖြစ်ကောင်းစွာသဘာဝကဆုလာဘ်များနှင့်ΔFosBအကြားဆက်ဆံရေးအကြံပြုထားသည်။ မိမိဆန္ဒအလျောက်ဘီးပြေးအဆိုပါ NAc အတွက်ΔFosBအဆင့်ဆင့်တိုးမြှင့်ပြသခဲ့ပြီး, ဤဦးနှောက်ဒေသအတွင်းΔFosB၏ overexpression နှစ်ပတ်အတွင်းကျော်အဘယ်သူ၏အပြေးကုန်းပြင်တိရိစ္ဆာန်များကိုထိန်းချုပ်ရန်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ရက်သတ္တပတ်အတော်ကြာ (အဘို့ကြာရှည်ခံရာပြေးတစ်ဦးမှန်မှန်တိုးဖြစ်ပေါ်စေသည်Werme et al ။ , 2002) ။ အလားတူပင်မြင့်မားသောအဆီဓာတ်စာ (အ NAc အတွက်ΔFosB inducesTeegarden နှင့်ဘေးလ်, 2007), ဤဒေသတွင်တိုးမြှင့်အတွက်ΔFosB overexpression (အစားအစာအကျိုးသည်တုံ့ပြန် instrumental စဉ်Olausson et al ။ , 2006) ။ ထို့အပြင်ယင်း fosB မျိုးဗီဇ (မိခင်အပြုအမူအတွက်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရသည်ကိုဘရောင်း et al ။ , 1996) ။ သို့သျောလညျးအနညျးငယျသတင်းအချက်အလက်ΔFosBနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ, အင်အားအကောင်းဆုံးသဘာဝကဆုလာဘ်တစ်ဦးအကြားဆက်ဆံရေးအပေါ်ရရှိနိုင်ပါသည်။ ထို့အပွငျလျော့နည်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းနေဆဲသဘာဝကဆုလာဘ်အပြုအမူပို compulsive ပင် "စွဲလမ်း," မော်ဒယ်များအတွက်ΔFosBရဲ့ဖြစ်နိုင်ချေပါဝင်ပတ်သက်မှုဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, အတော်ကြာအစီရင်ခံစာများ (sucrose စားသုံးမှု Paradigm တစ်ခုစွဲတူသောအသှငျအပွငျသရုပ်ပြပါပြီAvena et al ။ , 2008).
သဘာဝကဆုလာဘ်အပြုအမူတွေအတွက်ΔFosBအရေးယူကျွန်တော်တို့ရဲ့အသိပညာတိုးချဲ့ဖို့ကျနော်တို့ sucrose အရက်သောက်ခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူမော်ဒယ်များအတွက် NAc အတွက်ΔFosB၏ induction စုံစမ်းစစ်ဆေး။ ကျနော်တို့ကိုလည်း NAc အတွက်ΔFosB၏ overexpression အဆိုပါသဘာဆုလာဘ်မှအမူအကျင့်တုံ့ပြန်မှုကိုအထူးပြုပုံကိုပြဋ္ဌာန်းခြင်းနှင့်တစ်ကသဘာဝဆုလာဘ်မှကြိုတင်ထိတွေ့မှုကအခြားသဘာဝအကြိုးအပြုအမူတွေကိုမြှင့်တင်ရန်နိုင်မယ်ဆိုရင်။
အားလုံးတိရစ္ဆာန်အလုပျထုံးလုပျနညျး UT အနောက်တောင်ပိုင်း Medical Center မှများ၏ Institutional တိရိစ္ဆာန်စောင့်ရှောက်မှုနှင့်အသုံးပြုမှုကော်မတီကအတည်ပြုပေးခဲ့သည်။
1 အစည်းအဝေးများတစ်ဦးစုစုပေါင်း 2-8 ပတ်လိင်အတွေ့အကြုံရှိ Sprague-Dawley ကြွက် (ချားလ်စ်မြစ်, ဟူစတန်, တက္ကဆပ်) သူတို့ကိုသုတ်ရည်လွှတ်သည်အထိလက်ခံအမျိုးသမီးနှင့်အတူမိတ်ရန်ခွင့်ပြုခြင်းဖြင့်ထုတ်ပေးခဲ့ကြသည်အထီး, တစ်ပတ်ကိုခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 10-14 ကြိမ်။ ဖော်ပြထားသကဲ့သို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ (အကဲဖြတ်ခဲ့သည်Barrot et al ။ , 2005) ။ ထိန်းချုပ်ရေးအထီးကြုံတွေ့ယောက်ျားအဖြစ်, အချိန်၏တူညီသောငွေပမာဏအဘို့, တူညီတဲ့နယ်ပယ်တွင်နှင့်အိပ်ယာမှထိတွေ့မှုကနေထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ခဲ့ကြသည်။ အမျိုးသမီးသည်ဤထိန်းချုပ်မှုယောက်ျားနှင့်အတူနယ်ပယ်မှမိတ်ဆက်ဘယ်တော့မှခဲ့ကြသည်။ သီးခြားစမ်းသပ်မှုများတွင်တစ်ဦးအပိုဆောင်းစမ်းသပ်အုပ်စုတစ်စုထုတ်ပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်: အထီးသေး estrous ထဲသို့ဝင်မရဖူးတဲ့ဟော်မုန်း-ကုသအမျိုးသမီးမှမိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်။ ဤရွေ့ကားယောက်ျားအမျိုးသမီး Non-လက်ခံ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူသည်ဤအုပ်စုတွင်အောင်မြင်မခံခဲ့ရခဲ့ကြသည်သို့သော်ကတည်းကတောင်ပေါ်နှင့် intromissions ကြိုးစားခဲ့တယ်။ ပြီးခဲ့သည့် session တစ်ခုအပြီးတဆယ်ရှစ်နာရီ, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန် perfused သို့မဟုတ်ခေါင်းဖြတ်အသတ်ခံခြင်းနှင့်ဦးနှောက်တစ်သျှူးအပြောင်းအလဲနဲ့အဘို့သိမ်းယူကြ၏။ တိရစ္ဆာန်များ၏အခြားအုပ်စုတစ်စုအဘို့, ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်5ရက် 14 ပြီးနောက်th အောက်တွင်ဖော်ပြထားသကဲ့သို့ session တစ်ခု, sucrose preference ကိုစမျးသပျခဲ့သညျ။ မြင် ဖြည့်စွက်နည်းလမ်းများ နောက်ထပ်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုသည်။
(ပထမဦးဆုံးစမ်းသပ်မှုများတွင်ပုံ 1a), ကြွက် (2%2ရန်) တစ်ဦးချင်းစီတိုးမြှင့် sucrose ပြင်းအားမှာ 0.125 နေ့ရက်ကာလအဘို့တယောက်ပုလင်းရေနှင့် sucrose ၏အသီးအသီးအားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်, 50 နေ့ရက်ကာလအဘို့ရေနှစ်ပုလင်းမှန့်အသတ် access ကိုပေးသည်ခဲ့ကြသည်။ ရေနှစ်ပုလင်းတစ်6ရက်ကြာကာလတစ်ဦးတည်းသာရေပုလင်းနှင့် 0.125% sucrose တစ်ပုလင်း၏နှစ်ရက်ထို့နောက်နောက်သို့လိုက်ကြ၏။ (ဒုတိယစမ်းသပ်မှုများတွင်ပုံ 1b-c ကို, ပုံ 2), ကြွက် 10 နေ့ရက်ကာလအဘို့တယောက်ပုလင်းရေနှင့် 10% sucrose ၏တစ်ဦးချင်းစီမှန့်အသတ် access ကိုပေးသည်ခဲ့ကြသည်။ ထိန်းချုပ်ရေးတိရိစ္ဆာန်များသာရေနှစ်ပုလင်းကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ တိရစ္ဆာန်များ perfused သို့မဟုတ်လျှင်မြန်စွာခေါင်းဖြတ်အသတ်ခံခြင်းနှင့်ဦးနှောက်တစ်သျှူးအပြောင်းအလဲနဲ့အဘို့ကောက်ယူကြ၏။
နှစ်ဦးကပုလင်း sucrose ရွေးချယ်မှု Paradigm မြင့်တက် sucrose စားသုံးမှုကိုပြသ
အဆိုပါ NAc အတွက် Sucrose စားသုံးမှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတိုးΔFosBစကားရပ်
တစ်ဦးက Two-ပုလင်းရွေးချယ်မှုပါရာဒိုင်း (ယခင်ကဖော်ပြထားသကဲ့သို့ကောက်ယူခဲ့သည်Barrot et al ။ , 2002) ။ ဖြစ်နိုင်သမျှတစ်ဦးချင်းကွဲပြားမှုအဘို့ကိုထိန်းချုပ်ရန်, ခွဲစိတ်မတိုင်မီကတိရိစ္ဆာန်များရေနှင့် 30% sucrose အကြားနှစ်ပုလင်းရွေးချယ်မှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအဘို့မှောင်မိုက်အဆင့်၏ပထမဦးဆုံး 1 မိစဉ်အတွင်း Pre-စမ်းသပ်ပြီးခဲ့ကြသည်။ သုံးဗိုင်းရပ်စ်-mediated ဗီဇလွှဲပြောင်းပြီးနောက်ရက်သတ္တပတ် (အောက်တွင်ကြည့်ပါ) နှင့်မည်သည့်အပိုဆောင်းအမူအကျင့်စမ်းသပ်မီ, ရေကိုသာပေးတော်မူသောတိရိစ္ဆာန်များထို့နောက်ရေနှင့် 30% sucrose ဖြေရှင်းချက်များအကြားတစ်ဦး 1-မိ Two-ပုလင်းရွေးချယ်မှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအဘို့စမ်းသပ်စစ်ဆေးခဲ့ကြသည်။
လိင်အတွေ့အကြုံရှိနှင့်ထိန်းချုပ်မှုတိရိစ္ဆာန်များကြိုတင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတစ်ခု Pre-စမ်းသပ်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းရှိသည်မဟုတ်ခဲ့ပေ။ ငါးရက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ (သို့မဟုတ်ထိန်းချုပ်မှု) အပြုအမူများ၏ 14th session တစ်ခုပြီးနောက်, တိရိစ္ဆာန်များရေနှင့်၎င်းတို့၏မှောင်မိုက်-အလင်းသံသရာ၏ပထမဦးဆုံး 1 မိနေစဉ်အတွင်းတစ် 30% sucrose ဖြေရှင်းချက်များအကြားနှစ်ပုလင်းရွေးချယ်မှုစမ်းသပ်ပေးခဲ့သည်။ လိင်အတွေ့အကြုံရှိနှင့်ထိန်းချုပ်မှုတိရစ္ဆာန်များ၏သီးခြားအဖွဲ့များကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူပြီးနောက်ΔFosBအဆင့်ဆင့်တိုင်းတာဘို့နှင့် sucrose preference ကိုအပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုလေ့လာနေဘို့အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။
လာကြတယ်ခှဲစိတျဖြင့်ရရှိသော NAc ခှဲစိတျယခင်ကဖော်ပြထားသကဲ့သို့အနောက်တိုင်းချေအားဖြင့်သုံးသပ်ခဲ့ကြသည် (Perrotti et al ။ , 2004), (ကြည့်ရှုနေတဲ့ယုန် polyclonal Anti-FosB antibody ကိုသုံးပြီး Perrotti et al ။ , 2004 antibody ကိုစရိုက်လက္ခဏာတွေ) နှင့် glyceraldehyde-3-ဖော့စဖိတ် dehydrogenase (GAPDH) (RDI-TRK5G4-6C5 တစ် monoclonal antibody ကို၎င်း, တစ်ဦးကိုထိန်းချုပ်ပရိုတိန်းအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရသောသုတေသနရှာဖွေရေး, Concord MA, USA) ။ ΔFosBပရိုတိန်းပါဝင်မှုနှုန်း GAPDH မှပုံမှန်နှင့်စမ်းသပ်ဆဲနှင့်ထိန်းချုပ်မှုနမူနာနှိုင်းယှဉ်ခဲ့ကြသည်။ မြင် ဖြည့်စွက်နည်းလမ်းများ နောက်ထပ်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုသည်။
တိရစ္ဆာန်များ perfused ခဲ့ကြသည်နှင့်ဦးနှောက်တစ်ရှူးထုတ်ဝေ immunohistochemistry နည်းလမ်းများ (ကို အသုံးပြု. ကုသခဲ့ကြသည်Perrotti et al ။ , 2005) ။ ကြိုးလှုံ့ဆော်မှုဖို့နောက်ဆုံးထိတွေ့ဆန်းစစ်မတိုင်မီ 18-24 နာရီဖြစ်ပွားခဲ့သည်ကတည်းကကျနော်တို့ဒယ်အိုး-FosB antibody ကိုနှင့်အတူရှာဖွေတွေ့ရှိ, ရှိသမျှ FosB ကဲ့သို့ immunoreactivity စဉ်းစား (SC-48; Santa Cruz ဇီဝနည်းပညာ, Santa Cruz,, CA, USA), ΔFosBရောင်ပြန်ဟပ်ဖို့ (Perrotti et al ။ , 2004, 2005) ။ မြင် ဖြည့်စွက်နည်းလမ်းများ နောက်ထပ်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုသည်။
ဗိုင်းရပ်စ်-ဖျန်ဖြေ Gene လွှဲပြောင်း
ခွဲစိတ်ကုသအထီး Sprague-Dawley ကြွက်အပေါ်ဖျော်ဖြေခဲ့သည်။ Adeno-ဆက်စပ်ဗိုင်းရပ် (AAV) virus သယ်ဆောင်မြန်မာနိုင်ငံသထိုးသွင်းခဲ့ 1.5 (ယခင်ကဖော်ပြခဲ့သကဲ့သို့ NAc သို့ခြမ်းနှုန်းμlBarrot et al ။ , 2005) ။ မှန်ကန်သောနေရာချထား 40 μm cresyl-ခရမ်းရောင်ဆိုးကဏ္ဍများအပေါ်စမ်းသပ်ချက်အပြီးမှန်ကန်ကြောင်းအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ Vector (သာအစိမ်းရောင်ချောင်းပရိုတိန်း (GFP) (AAV-GFP) သို့မဟုတ်ရိုင်း-type အမျိုးအစားΔFosBနှင့် GFP (AAV-ΔFosB) ဖော်ပြထားတဲ့ AAV ဖော်ပြတဲ့ထိန်းချုပ်မှုပါဝင်သည်Zachary et al ။ , 2006) ။ Transgene စကားရပ်လုပျသငျဖွစျပါသညျအခါ NAc အတွင်း Transgene စကားရပ်၏အချိန်-သင်တန်းအပေါ်အခြေခံပြီး, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန် (AAV virus သယ်ဆောင်၏ဆေးထိုးပြီးနောက်အပြုအမူ 3-4 ပတ်စမ်းသပ်ပြီးခဲ့ကြသည်Zachary et al ။ , 2006) ။ မြင် ဖြည့်စွက်နည်းလမ်းများ နောက်ထပ်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုသည်။
ထူးခြားမှုကိုအချက်နှစ်ချက်ပါသောထပ်ခါတလဲလဲတိုင်းတာမှု ANOVAs နှင့်ကျောင်းသား၏ t စစ်ဆေးမှုများကို အသုံးပြု၍ နှိုင်းယှဉ်မှုများစွာပြုလုပ်သည့်နေရာတွင်တည့်မတ်ပေးခဲ့သည်။ ဒေတာ SEM ±နည်းလမ်းအဖြစ်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုနေကြပါတယ်။ စာရင်းအင်းအရေးပါမှု * p <0.05 အဖြစ်သတ်မှတ်ခံခဲ့ရသည်။
ကျနော်တို့ sucrose များ၏အာရုံစူးစိုက်မှုခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်တိုင်းနှစ်ရက်ရေနှစ်ပုလင်း၏2ရက်အကြာမှာနှစ်ဆတိုးခဲ့သည့်အတွက်တစ်ဦးနှစ်ဦးပုလင်းရွေးချယ်မှုပါရာဒိုင်းအကောင်အထည်ဖော်။ အဆိုပါ sucrose အာရုံစူးစိုက်မှု 0.125% မှာစတင်% 50 မှတိုးတက်လာခဲ့သည်။ တိရစ္ဆာန်များ 0.25% sucrose သည်အထိတစ် sucrose preference ကိုပြသ, ပြီးတော့အားလုံးပိုမိုမြင့်မားပြင်းအားမှာရေထက်ပိုမို sucrose သောက်ဘဲနေ၏။ အဆိုပါ 0.25% အာရုံစူးစိုက်မှုမှာစတင်ခြင်း, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အများဆုံး sucrose အသံအတိုးအကျယ်5နှင့် 10% မှာရောက်ရှိခဲ့ပါသည်သည်အထိ sucrose ၏တိုးပွားလာ volumes ကိုသောက်၏။ 20% နှင့်ပိုမိုမြင့်မားမှာပါ, သူတို့ကစုစုပေါင်း sucrose စားသုံးမှုတည်ငြိမ်အဆင့်ဆင့်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့သူတို့ရဲ့ sucrose အသံအတိုးအကျယ်ကိုလျော့ချဖို့စတင် (ပုံ 1a နှင့် inset) ။ ဒီပါရာဒိုင်းပြီးနောက်တိရိစ္ဆာန်များသာရေနှစ်ပုလင်းနှင့်အတူ6ရက်ကြာ, ပြီးတော့နှစ်ရက်တစ် 0.125% sucrose ပုလင်းသို့မဟုတ်ရေတစ်ရွေးချယ်မှုနှင့်အတူတင်ပြခဲ့ကြသည်။ တိရိစ္ဆာန်များကဒီအာရုံစူးစိုက်မှုမှာရေထက်ပိုမို sucrose သောက်, နေ့ 1 ပေါ်မှာဤ sucrose အာရုံစူးစိုက်မှုမှကနဦးထိတွေ့မှုအပျေါမှာလေ့လာတွေ့ရှိ preference ကို၏မရှိခြင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်သိသိသာသာ sucrose preference ကိုပြ။
အများဆုံးအသံအတိုးအကျယ်စားသုံးမှုတစ် 10% အာရုံစူးစိုက်မှုမှာရောက်ရှိခဲ့ပါသည်သောကြောင့်, ရင်တော့မှားမယ်တိရိစ္ဆာန်များ 10 နေ့ရက်ကာလအဘို့ရေများထဲမှပုလင်းနှင့် 10% sucrose များထဲမှပုလင်းအကြားရွေးချယ်မှုပေးထားသောနှင့်ရေကိုသာနှစ်ခုပုလင်းပေးထားတဲ့ထိန်းချုပ်မှုအုပ်စုတစ်စုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ခဲ့ကြသည်။ တစ်ရက် 10 အားဖြင့် sucrose စားသုံးမှု၏မြင့်မားသောအဆင့်အတန်းမှ built Sucrose တိရိစ္ဆာန်များ (ပုံ 1b) ။ ဆက်လက် sucrose ထိတွေ့တိရိစ္ဆာန်များကိုထိန်းချုပ်ရန်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အပြီးသူတို့ကအစ (အလေးချိန်အတွင်းကွာခြားချက်အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှတိုးပွားလာအတူသိသိသာသာပိုပြီးအလေးချိန်ရရှိခဲ့ပုံ 1c).
ကျနော်တို့ (blotting အနောက်တိုင်းအသုံးပြုမှုအားဖြင့် NAc အတွက်ΔFosB၏အဆင့်ဆင့်များအတွက် 10% sucrose ပါရာဒိုင်းပေါ်ဤအကြောင်းတိရိစ္ဆာန်များခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပုံ 2a) နှင့် immunohistochemistry (ပုံ 2b) ။ sucrose ၌ဤဦးနှောက်ဒေသတွင်း၌ΔFosBပရိုတိန်း၏ induction ထင်ရှားနှစ်ဦးစလုံးနည်းလမ်းများထိန်းချုပ်မှုတိရိစ္ဆာန်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်တွေ့ကြုံ။ တစ်ခုလုံးကိုΔFosBပရိုတိန်း sequence ကို Full-အရှည် FosB ၏အတွင်းပါရှိသောဖြစ်ပါတယ်ကတည်းက FosB ကဲ့သို့ immunoreactivity detect ဖို့အသုံးပြုပဋိ (နှစ်ဦးစလုံးပရိုတိန်းကိုအသိအမှတ်မပြုPerrotti et al ။ , 2004, 2005) ။ သို့သော်အနောက်တိုင်းချေသာΔFosBသိသိသာသာ sucrose-အရက်သောက်ခြင်းဖြင့်သွေးဆောင်ခဲ့ကွောငျးဖျောပွထားပါ။ ဤသည် immunohistochemistry နေဖြင့်လေ့လာတွေ့ရှိ signal ကိုအတွက်ခြားနားချက်ΔFosBကိုကိုယ်စားပြုကြောင်းဖော်ပြသည်။ လေ့လာအဆိုပါတိုးလာ ပုံ 2b အဆိုပါ NAc core နဲ့ shell ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပေမယ် (ပြမဟုတ်) striatum dorsal မခံခဲ့ရပါဘူး။
ကျနော်တို့ဘေးနားရှိ NA အတွက်ΔFosB၏ induction အပေါ်နာတာရှည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများစုံစမ်းစစ်ဆေးc. လိင်ကြုံတွေ့အထီးကြွက်တစ်ဦး 14-8 တပတ်အချိန်ကာလအတွင်း 10 အစည်းအဝေးများအဘို့အသုတ်ရည်လွှတ်သည်အထိတစ်လက်ခံအမျိုးသမီးနှင့်အတူန့်အသတ် access ကိုခွင့်ပြုပေးခဲ့သည်။ အရေးကြီးတာက, ထိန်းချုပ်မှုတိရိစ္ဆာန်များ Home-လှောင်အိမ်ထိန်းချုပ်မှုမဟုတ်ကြပေမယ့်အစားစမ်းသပ်ခြင်းရက်ပေါင်းနှင့်အချိန်၏တူညီသောငွေပမာဏအဘို့ကားလက်ခံအမျိုးသမီးမှထိတွေ့မှုမပါဘဲဖြစ်ပွားခဲ့သည်ထားတဲ့သုတ်ရည်ထိအတွက်ပွင့်လင်းသောလယ်နယ်ပယ်တွင်နှင့်အိပ်ယာမှထိတွေ့မှုအပေါ်အလားတူကိုင်တွယ်ခြင်းဖြင့်ထုတ်ပေးခဲ့မှုအတွက်ထိန်းချုပ် olfaction နှင့်ကိုင်တွယ်ခြင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုများ။ အနောက်တိုင်းချေအသုံးပြုခြင်း, ငါတို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံကသိသိသာသာထိန်းချုပ်မှုအုပ်စုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ΔFosB၏အဆင့်ဆင့်တိုးမြှင့်ကြောင်းတွေ့ရှိရ (ပုံ 2a), Full-အရှည် FosB မရှိရှာဖွေ ထောက်လှမ်း. အဆင့်ဆင့်နှင့်အတူလေ့လာသည်။ ဤအဒေတာတွေနဲ့ကိုက်ညီ, immunohistochemistry (ထို NAc ၏ core နဲ့ shell ကိုနှစ်ဦးစလုံးအတွက်ΔFosBအစွန်းအထင်းတစ်ခုတိုးထင်ရှားပုံ 2c), သော်လည်းမ (ပြမဟုတ်) striatum dorsal ။
ΔFosBအတွက်တိုးလာသည့်လိင်-အတွေ့အကြုံရှိတိရိစ္ဆာန်များအတွက်လေ့လာတွေ့ရှိကြောင်းသေချာစေရန်လူမှုရေးအပြန်အလှန်သို့မဟုတ်အချို့သောအခြား Non-မိတ်လိုက် related နှိုးဆွမှုကြောင့်မဟုတ်ခဲ့, ငါတို့ဟော်မုန်း-ကုသအမျိုးသမီးထိတွေ့ခဲ့ပြီးသော Non-မိတ်လိုက်အထီးနေထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့, ဒါပေမယ့် copulate ခွင့်မပြု။ ဤရွေ့ကားယောက်ျား olfaction-နယ်ပယ်တွင်ထိန်းချုပ်မှုတိရစ္ဆာန်များ၏သီးခြားအစု (နှိုင်းယှဉ်ΔFosBအဆင့်ဆင့်မကွာခြားချက်ပြသသင်္ဘောသဖန်း။ 2a), ΔFosBသော induction လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်မလူမှုရေးသို့မဟုတ် Non-မိတ်လိုက်တွေကိုတုန့်ပြန်ဖြစ်ပေါ်ကြောင်းအကြံပြု။
ရက်သတ္တပတ်အတော်ကြာကျော်ΔFosB၏တည်ငြိမ်စကားရပ်ဖွသည့်ဗိုင်းရပ်စ်-mediated overexpression စနစ်, အသုံးပြုခြင်း (Zachary et al ။ , 2006()ပုံ 3a), ကျနော်တို့ (sucrose အရက်သောက်အပြုအမူအပေါ်, အထူး NAc ပစ်မှတ်ထား, ΔFosB၏အဆင့်မြင့်၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုစုံစမ်းစစ်ဆေးပုံ 3b) ။ ကျနော်တို့ပထမ ဦး ဆုံးတစ် ဦး sucrose စားသုံးမှုအကြိုစမ်းသပ်မှုနှင့်အတူခွဲစိတ်မှုမတိုင်မီအခြေခံ sucrose အပြုအမူမျှကွဲပြားခြားနားမှုရှိကွောငျးကိုအာမခံထား (AAV-GFP: 6.49 ± 0.879 ml; AAV-osFosB: 6.22 ± 0.621 ml, n = 15 / အုပ်စု, p> 0.80) ) ။ ခွဲစိတ်ကုသမှုခံပြီးသုံးပတ်အကြာΔFosBဖော်ပြမှုသည် ၁၀ ရက်ခန့်တည်ငြိမ်သောအခါတိရိစ္ဆာန်များကိုခွဲစိတ်ကုသမှုခံယူပြီးနောက်စစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်ခဲ့သည်။ AAV-osFosB အုပ်စုသည် AAV-GFP ထိန်းချုပ်သောအဖွဲ့များထက်သိသိသာသာပိုမိုယိုစိမ့်မှုကိုသောက်ခဲ့သည် (ပုံ 3b) ။ အုပ်စုနှစ်ခုအကြားရေစားသုံးမှုပမာဏ (AAV-GFP: 0.92 ± 0.019 ml; AAV-osFosB: 0.95 ± 0.007 ml, n = 15 / group, p> 0.15) အကြားရေစားသုံးမှုပမာဏကွဲပြားခြားနားမှုမရှိပါ။ sucrose မှတိကျတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ NAc အတွက်ΔFosB၏ Overexpression သဘာဝကဆုလာဘ်အပြုအမူ၏ရှုထောင့်ကိုထိန်းညှိ
Next ကိုကျနော်တို့ NAc အတွက်ΔFosB overexpression ရင်တော့မှားမယ်နှင့်အတွေ့အကြုံရှိတိရစ္ဆာန်များ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူထိန်းညှိခြင်းရှိမရှိဆန်းစစ်. ကျနော်တို့ AAV-ΔFosBနှင့် -GFP အကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏ parameters တွေကိုများတွင်မဆိုကွဲပြားခြားနားမှုအတွေ့အကြုံရှိတိရစ္ဆာန်များကုသမတှေ့ပေမဲ့ (ကြည့်ရှု ဖြည့်စွက်ဇယား S1), ရင်တော့မှားမယ်တိရိစ္ဆာန်များအတွက်ΔFosB၏ overexpression သိသိသာသာကိုပထမဦးဆုံးလိင်မှုဆိုင်ရာအပြုအမူအတွေ့အကြုံသုတ်ရည်လွှတ်ရောက်ရှိရန်လိုအပ် intromissions ၏နံပါတ်လျော့နည်းသွား (ပုံ 3c). ပထမဦးဆုံးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံကအောက်ပါΔFosBအုပ်စုသည်များအတွက် Post-ejaculatory ကြားကာလတစ်ဦးကျဆင်းခြင်းများအတွက်လမ်းကြောင်းသစ်လည်းရှိခဲ့သည် (ပုံ 3c). ဆနျ့ကငျြမရှိကွဲပြားခြားနားမှုဖြစ်စေသည့်ရင်တော့မှားမယ်သို့မဟုတ်အတွေ့အကြုံရှိတိရိစ္ဆာန်များအတွက်ဘယ်အရာမှမပါဘဲ, intromissions, ဒါမှမဟုတ်သုတ်ရည်လွှတ်ဘို့အ latency အတွက်လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ကြသည် (ကြည့်ရှု ဖြည့်စွက်ဇယား S1) ။ ဒီကြောင့်တစ်ဦးချင်းစီအုပ်စုတွင်တောင်ပေါ်၏နံပါတ်၌မြင့်အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲနိုင်ရန်ဖြစ်နိုင်သည်ပေမယ့်အလားတူမရှိခြားနားချက်, (intromissions / အရေအတွက် [intromissions + တောင်ပေါ်အရေအတွက်အရေအတွက်]) ကို intromission အချိုးအဘို့ရှုလေ့လာခဲ့သည်။
ကျနော်တို့နှစ်ဦးစလုံးဆုလာဘ်တစ်ခု sucrose အရက်သောက်ခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေ့အကွုံနှစ်ဦးစလုံးပြီးနောက် NAc အတွက်ΔFosBအဆင့်ဆင့်အတွက်တိုးနှင့်ΔFosB overexpression လွှမ်းမိုးမှုအပြုအမူတုံ့ပြန်မှုကိုတွေ့ကတည်းကကဆုလာဘ်တကြိုတင်ထိတွေ့မှုသိသိသာသာအခြားမှအမူအကျင့်တုံ့ပြန်မှုထိခိုက်ခြင်းရှိမရှိလေ့လာစူးစမ်းဖို့အကျိုးစီးပွားခဲ့သည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေ့အကွုံမီ, ရင်တော့မှားမယ်တိရိစ္ဆာန်များကျပန်းအခြေအနေများထိန်းချုပ်သို့မဟုတ်လိင်မှတာဝန်ကျတယ်။ အစောပိုင်းကဖော်ပြထားသကဲ့သို့တိရစ္ဆာန်များထို့နောက် 8-10 ရက်သတ္တပတ်ကျော်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံများသို့မဟုတ်ထိန်းချုပ်မှုအခြေအနေများနှင့်ထိတွေ့ခဲ့သည်။ ငါးရက်ကနောက်ဆုံးလိင် session တစ်ခုအပြီး, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တဦးတည်းရေပုလင်းနှင့် sucrose တဦးအကြားတစ်ဦး 30-မိနှစ်ခုပုလင်းရွေးချယ်မှုပါရာဒိုင်းအကြောင်းမဲ့ခဲ့ကြသည်။ ကျနော်တို့လိင်ကြုံတွေ့တိရိစ္ဆာန်များထိန်းချုပ်မှုထက်သိသိသာသာပိုပြီး sucrose သောက်တွေ့ရှိခဲ့s ကို (ပုံ 3b) ။ ရေစားသုံးမှုနှင့်အတူကြည့်ရှုလေ့လာခဲ့သည်လိင်ကြုံတွေ့နှင့်ထိန်းချုပ်မှုတိရိစ္ဆာန်များအကြားဘယ်သူမျှမကခြားနားချက် (ထိန်းချုပ်ရေး: 1.21 ± 0.142 ml; လိင်အတွေ့အကြုံရှိပြီးသား: 1.16 ± 0.159 ml, ဎ = 7-9, p = 0.79) သည်အကျိုးသက်ရောက်မှု sucrose မှတိကျတဲ့ကြောင်းအကြံပြု။
ဒီလေ့လာမှုကလိင်နှင့် sucrose နှင့်ဆက်စပ်သောသဘာဝကဆုလာဘ်အပြုအမူတွေအတွက်ΔFosB၏အခန်းကဏ္ဍကို elucidating အတွက်စာပေအတွက်ယခင်ကွာဟမှုဆိုထားသည်။ ကျနော်တို့ပထမဦးဆုံးကသဘာဝဆုလာဘ်မှနာတာရှည်ထိတွေ့ပြီးနောက်, ΔFosBအဆိုပါ NAc အတွင်းစုဆောင်းရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရန်အရေးကြီးဦးနှောက်ဆုလာဘ်ဒေသထွက်ထားကြ၏။ ဒီအလုပျ၏အရေးပါသောအင်္ဂါရပ်မူးယစ်ဆေး Self-အုပ်ချုပ်ရေး Paradigm မှတစ်ခုနဲ့နှိုင်းယှဉ်ခြင်းဖြင့်၎င်းတို့၏အပြုအမူအတွက်တိရိစ္ဆာန်များကိုတစ်ဦးရွေးချယ်မှုပေးခြင်းခံခဲ့ရသည်။ ဤသည်ΔFosBအဆင့်ဆင့်အပေါ်တစ်စုံတစ်ရာသက်ရောက်မှုအကျိုးကို၏ဆန္ဒအလျောက်စားသုံးမှုနှင့်ဆက်စပ်သောခံခဲ့ရကြောင်းသေချာစေရန်ဖြစ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ sucrose မော်ဒယ် (ပုံ 1ဆုလာဘ်နှင့်ထိန်းချုပ်မှုများအကြားတစ်ဦးရွေးချယ်မှုတစ်ခု inverted ဦး-shaped ထိုးတုံ့ပြန်မှုကွေး, ဆုတ်ခွာပြီးနောက်ထိခိုက်တုံ့ပြန်မှုများနှင့်အလွန်အကျွံစားသုံးမှု:) အခြား sucrose စားသုံးမှုမော်ဒယ်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်စွဲလမ်းကဲ့သို့အပြုအမူ၏ရှုထောင့်ပြသသည်။ Tမိမိအမော်ဒယ်လည်းထိုကဲ့သို့သောနေ့စဉ်ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းသကြားမော်ဒယ်ကဲ့သို့သောအခြားမော်ဒယ်များတွင်တွေ့မြင်, မတိုးချဲ့ကိုယ်အလေးချိန်ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည် (Avena et al ။ , 2008).
ကျွန်ုပ်တို့၏ဒေတာသဘာဝကဆုလာဘ်နှစ်ခုသော့ချက်အမျိုးအစားများ, sucrose နှင့်လိင်, အ NAc အတွက်နှစ်ဦးစလုံးတိုးΔFosBအဆင့်ဆင့်အကြောင်း, ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့, တည်စေကြ၏။ ဤရွေ့ကားတိုးအနောက်တိုင်းချေနှင့် immunohistochemistry အားဖြင့်ကြည့်ရှုလေ့လာကြသည် ဟူ. ၎င်း, နှစ်ဦးစလုံးနည်းလမ်းများသုံးပြီးလေ့လာပရိုတိန်းထုတ်ကုန်အမှန်ပင်ΔFosBနှင့်မပြည့်အရှည် FosB သည်၏အခြားထုတ်ကုန်ကြောင်း insures fosB မျိုးဗီဇ။ sucrose နှင့်လိင်အားဖြင့်ΔFosBများ၏ရွေးချယ်သော induction (တွေ့မြင်အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးလုံးဝနီးပါးအားလုံးအမျိုးအစားများနာတာရှည်အုပ်ချုပ်ရေးပြီးနောက် NAc အတွက်ΔFosBများ၏ရွေးချယ်သော induction ဆင်တူသည် နိဒါန္း). မှတ်စု၏, သို့သော် NAc အတွက်ΔFosBသော induction ၏ဒီဂရီမှာသဘာဝဆုလာဘ်တုံ့ပြန်ဒီနေရာမှာလေ့လာတွေ့ရှိသောလေ့လာရေးမူးယစ်ဆေးဆုလာဘ်အဘို့မြင်ကြကြောင်းနှိုင်းယှဉ်သေးငယ်ဖြစ်ပါသည်: sucrose အရက်သောက်ခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအတွက်ΔFosBအဆင့်ဆင့်အတွက် 40-60% တိုးထုတ်လုပ် အလွဲသုံးစားမှုအများအပြားမူးယစ်ဆေးနှင့်အတူမြင်ပြီအများအပြား-ခြံသော induction မတူဘဲ (Perrotti et al ။ , 2008).
ဤလေ့လာမှု၏ဒုတိယရည်မှန်းချက်မှာသဘာဝဆုလာဘ်-related အပြုအမူတွေအပေါ် NAc အတွက်ΔFosBသော induction ၏အလုပ်လုပ်တဲ့အကျိုးဆက်စုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ဖို့ဖြစ်တယ်။ မူးယစ်ဆေးဆုလာဘ်အပေါ်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုΔFosBပေါ်မှာငါတို့ကြိုတင်အလုပ်အများကြီးΔFosBစကားရပ် NAc နှင့် dorsal striatum ဖို့ပစ်မှတ်ထားသည်အဘယ်မှာရှိသွေးဆောင် bitransgenic ကြွက်၏အသုံးပြုမှုကိုဖန်ဆင်းတော်မူပြီ။ ဤရွေ့ကားΔFosB overexpressing ကြွက် (တွေ့မြင်ကိုကင်းနှင့်အ opiates မှတိုးမြှင့်အမူအကျင့်တုံ့ပြန်မှုအဖြစ်တိုးမြှင့်ဘီးပြေးနှင့်စားနပ်ရိက္ခာများအတွက်တုံ့ပြန်ဆာကိုပြသ နိဒါန္း) ။ ဒီလေ့လာမှုမှာကျနော်တို့ (stably အထီးကြွက်များ၏ပစ်မှတ်ထားဦးနှောက်ဒေသများတွင်ΔFosB overexpress တစ်ဦးထက်ပိုသောမကြာသေးမီကတီထွင်ဗိုင်းရပ်စ်-mediated ဗီဇလွှဲပြောင်းစနစ်အားအသုံးပြုခဲ့Zachary et al ။ , 2006) ။ ကျနော်တို့အုပ်စုနှစ်စုအကြားရေစားသုံးမှုမကွဲပြားမှုနှင့်အတူတိရိစ္ဆာန်များကိုထိန်းချုပ်ရန်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါမှာΔFosB overexpression sucrose စားသုံးမှုတိုးပွားလာကြောင်းဤနေရာတွင်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
ငါတို့သည်လည်းΔFosBလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူသြဇာလွှမ်းမိုးပုံကိုစုံစမ်းစစ်ဆေး။ ကျနော်တို့ NAc အတွက်ΔFosB overexpression လိင်ရင်တော့မှားမယ်တိရိစ္ဆာန်များအတွက်သုတ်ရည်လွှတ်ဘို့လိုအပ် intromissions ၏နံပါတ်လျော့ကျကြောင်းသရုပ်ပြခဲ့သည်။ ဤသည်တောင်ပေါ်မှာမြားတှငျပွောငျးလဲ, intromission, ဒါမှမဟုတ်သုတ်ရည်လွှတ် latency အပါအဝင်ရင်တော့မှားမယ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအခြားကွဲပြားမှုနှင့်အတူကိုက်ညီခြင်းမရှိပါ။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, ΔFosB overexpression လိင်ကြုံတွေ့တိရိစ္ဆာန်များအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူမဆိုအသှငျအပွငျမထိခိုက်ခဲ့ပါဘူး။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူကိုသြဇာလွှမ်းမိုးဖို့ NAc အတွက်ကိုင်တွယ်များ၏စွမ်းရည်ကိုကဒီဦးနှောက်ဆုလာဘ်ဒေသလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ behavio ထိန်းညှိသောကြီးထွားလာသက်သေအထောက်အထားပေးထားအံ့သြစရာတော့မဟုတ်ပါဘူးr (Balfour et al ။ , 2004; Hull နဲ့ Dominguez, 2007). intromissions အရေအတွက်ထဲမှာΔFosB-သွေးဆောင်ကျဆင်းခြင်းဟာ NAc အတွက်ΔFosB overexpression နဲ့ရင်တော့မှားမယ်တိရိစ္ဆာန်များအတွက်ပိုပြီးအတွေ့အကြုံရှိတိရစ္ဆာန်များလိုပဲအလုပ်လုပ်တယ်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတစ်ခုတိုးမြှင့်ရောင်ပြန်ဟပ်နိုင်ဘူး။ ဥပမာအားဖြင့်, ထပ်ခါတလဲလဲလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံ၏စမ်းသပ်မှုအတွက်တိရိစ္ဆာန်များကို (သုတ်ရည်လွှတ်ရောက်ရှိဖို့နည်းပါးလာ intromissions လိုအပ်Lumley နှင့် Hull, 1999) ။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, ΔFosB overexpression အတူ Post-ejaculatory ကြားကာလ (pei) တွင်တစ်ဦးကျဆင်းခြင်းများအတွက်လမ်းကြောင်းသစ်လည်းပိုပြီးလိင်လှုံ့ဆျောအတွက်စောင့်ကြည့်လေ့လာအပြုအမူတွေ, အတွေ့အကြုံရှိယောက်ျား (ထင်ဟပ်Kippin နှင့်ဗန် der Kooy, 2003) ။ T ကogether ဤတွေ့ရှိချက်ကြောင့်ΔFosBအကြံပြု ရင်တော့မှားမယ်တိရိစ္ဆာန်များအတွက် overexpression ရင်တော့မှားမယ်တိရိစ္ဆာန်များကိုပိုပြီးအတွေ့အကြုံရသို့မဟုတ်လိင်လှုံ့ဆော်မှုတိရိစ္ဆာန်များတူအောင်နေဖြင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူလွယ်ကူချောမွေ့စေနိုင်သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, ငါတို့အတွေ့အကြုံရှိလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအပေါ်ΔFosB overexpression ၏သိသာထင်ရှားသောအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုစောငျ့ရှောကျခဲ့ပါဘူး။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများပိုမိုရှုပ်ထွေးအပြုအမူလေ့လာမှုများ (ဥပမာ, အခြေအနေများအရပျကိုဦးစားပေး) ပိုကောင်းΔFosB၏ဖြစ်နိုင်ခြေအကျိုးသက်ရောက်မှုများခွဲခြားမှုလိမ့်မည်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျနော်တို့တဦးတည်းကသဘာဝဆုလာဘ်မှကြိုတင်ထိတွေ့မှုခငျြးခငျြးအမူအကျင့်တုံ့ပြန်မှုအပေါ်သက်ရောက်မှုကိုမည်သို့စုံစမ်းစစ်ဆေး။ အထူး ကျနော်တို့ sucrose စားသုံးမှုအပေါ်ကြိုတင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုစိတ်ပိုင်းဖြတ်။ ထိန်းချုပ်မှုများနှင့်လိင်ကြုံတွေ့တိရိစ္ဆာန်များနှစ်ဦးစလုံး sucrose အဘို့ခိုင်ခံ့ preference ကိုပြသပေမယ့်, အဆိုပါလိင်ကြုံတွေ့တိရိစ္ဆာန်များပိုပြီး sucrose သောက်, ရေသုံးစွဲမှုမပြောင်းလဲမှုနှင့်အတူ။ ဒီအထဲတွင်တစ်ခုစိတ်ဝင်စားဖို့တွေ့ရှိချက်ဖြစ်ပါတယ် တစ်ဦးတစ်စိတ်တစ်ပိုင်း shared မော်လီကျူးအခြေခံ (ဥပမာΔFosB) ရှိခဲ့လျှင်မျှော်လင့်ထားလိမ့်မည်ဟုအဖြစ်ကတဦးတည်းဆုလာဘ်မှကြိုတင်ထိတွေ့အခြားအကြိုးစီးပွားရေးနှိုးဆွမှုရဲ့အကြိုးတန်ဖိုးကိုအရှိန်မြင့်စေခြင်းငှါအကြံပြုကြောင်းဆုလာဘ် sensitivity ကို၏။ ဒီလေ့လာမှုအလားတူယခင်ကလိင်မှုဆိုင်ရာအပြုအမူထိတွေ့အမျိုးသမီးဟမ်းစတား (ကိုကင်းများ၏အမူအကျင့်သက်ရောက်မှုမှပိုကောင်း sensitivity ကိုပြသBradley နှင့် Meisel, 2001). ပစ္စုပ္ပန်ဆုလာဘ်များရိပ်မိတန်ဖိုးကိုအတိတ်ဆုလာဘ်ထိတွေ့မှုအပျေါမှာတညျဆောကျကြောင်းတွင်ဤတွေ့ရှိချက်များ, ဦးနှောက်ရဲ့ဆုလာဘ် circuitry အတွင်း plasticity ၏အယူအဆထောက်ခံပါတယ်။
အကျဉ်းချုပ်ထဲမှာ, ဒီမှာတင်ဆက်အလုပ်အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများအပြင်, သဘာဝဆုလာဘ်ဟာ NAc အတွက်ΔFosBအဆင့်ဆင့်သွေးဆောင်သောသက်သေအထောက်အထားပေးစွမ်းသည်။ မူးယစ်ဆေးဆုလာဘ်ဘို့ယခင်ကလေ့လာတွေ့ရှိထားပါတယ်အဖြစ်အလားတူပဲဒီဦးနှောက်ဒေသတွင်း၌ΔFosB၏ overexpression သဘာဝကဆုလာဘ်တစ်ခုတိရိစ္ဆာန်ရဲ့အမူအကျင့်တုံ့ပြန်မှုထိန်းညှိ။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်ΔFosBဆုလာဘ်ယန္တရားများ၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအတွက်ပိုပြီးယေဘုယျအခန်းကဏ္ဍနှင့်မူးယစ်ဆေးအများအပြားအမျိုးအစားများနှင့်သဘာဆုလာဘ်ကိုဖြတ်ပြီးလေ့လာတွေ့ရှိလက်ဝါးကပ်တိုင်-sensitive ဖျန်ဖြေကိုကူညီစေခြင်းငှါအကြံပြုအပ်ပါသည်။ အဖြစ်ကောင်းစွာကျွန်တော်တို့ရဲ့ရလဒ်များ NAc အတွက်ΔFosBသော induction မူးယစ်ဆေးစွဲ၏သော့ချက်ရှုထောင့်ကိုသာဖျန်ဖြေ, ဒါပေမယ့်လည်းသဘာဝကဆုလာဘ်များ compulsive စားသုံးမှုပတျသကျလို့ခေါ်သည့်သဘာဝစှဲ၏ရှုထောင့်စေခြင်းငှါဖြစ်နိုင်ခြေမြှင့်။
ဤလုပ်ငန်းကိုမူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုနှင့် Schizophrenia နှင့်စီးပွားပျက်ကပ်အတွင်းသုတေသနများအတွက်အမျိုးသားမဟာမိတ်အဖွဲ့ကနေစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးနှင့်အမျိုးသား Institute ၏အမျိုးသားအင်စတီကျုကနေထောက်ပံ့ငွေကထောက်ခံခဲ့သည်။
Avena မိုင်, Rada P ကို, Hoebel BG ။ သကြားစွဲလမ်းများအတွက်သက်သေအထောက်အထား: ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်း, အလွန်အကျွံသကြားစားသုံးမှု၏အမူအကျင့်များနှင့် neurochemical ဆိုးကျိုးများ။ neuroscience Biobehav ဗျာ 2008;32: 20-39 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Barrot M က, Olivier JD, Perrotti LI, DiLeone RJ, Berton အို Eisch AJ, Impey S က, မုန်တိုင်း DR, Neve RL, ယဉ် JC, Zachary V ကို, Nestler EJ ။ နျူကလီးယပ်အတွက် CREB လှုပ်ရှားမှုစိတ်ခံစားမှုလှုံ့ဆော်မှုမှအမူအကျင့်တုံ့ပြန်မှုများ shell ကိုထိန်းချုပ်မှု Gates accumbens ။ proc Natl Acad သိပ္ပံအမေရိကန်အေ 2002;99: 11435-11440 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Barrot M က, Wallace DL, Bolanos, CA, ဂရေဟမ် DL, Perrotti LI, Neve RL, Chambliss H ကို, ယဉ် JC, Nestler EJ ။ နျူကလီးယပ် accumbens အတွက် CREB နေဖြင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများစတင်၏စည်းမျဉ်း။ proc Natl Acad သိပ္ပံအမေရိကန်အေ 2005;102: 8357-8362 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
ဘရောင်း JR, သငျတို့သ H ကို, Bronson RT ကို, Dikkes P ကို, Greenberg ME ။ ချက်ချင်းအစောပိုင်းဗီဇ fosB ချို့တဲ့ကြွက်တွေအတွက်ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းအတွက်တစ်ဦးကချွတ်ယွင်း။ cell ။ 1996;86: 297-309 ။ [PubMed]
Cenci MA ။ ပါကင်ဆန်ရောဂါကြွက်၏ပုံစံတွင် L-DOPA-induced dyskinesia ၏ pathogenesis တွင်ပါဝင်သည့်ကူးယူခြင်းအချက်များ။ အမိုင်နိုအက်ဆစ်။ 2002;23: 105-109 ။ [PubMed]
Hull က EM, Dominguez JM ။ အထီးကြွက်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ။ Horm ပြုမူနေ။ 2007;52: 45-55 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Kippin TE, အ tegmental pedunculopontine နျူကလိယ၏ဗန် der Kooy ဃ Excitotoxic ကိုတွေ့ရှိရပါသည်နုံအထီးကြွက်များတွင်သုတ်ရည်ထိအယှက်များနှင့်အတွေ့အကြုံရှိအထီးကြွက်များတွင်သုတ်ရည်ထိ၏အကြိုးသက်ရောက်မှုပိတ်ဆို့။ EUR J ကို neuroscience ။ 2003;18: 2581-2591 ။ [PubMed]
Lumley LA က, Hull က EM ။ တစ်ဦး D1 ရန်နှင့် medial preoptic နျူကလိယထဲမှာသုတ်ရည်ထိ-သွေးဆောင် Fos ကဲ့သို့ immunoreactivity အပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံ၏ဆိုးကျိုးများ။ ဦးနှောက် Res ။ 1999;829: 55-68 ။ [PubMed]
McDaid J ကို, ဂရေဟမ်အမတ်, Napier TC ။ စိတ်ကြွဆေး-သွေးဆောင်ာင်း differential သည့်နို့တိုက်သတ္တဝါငယ်တွေကဦးနှောက်၏ limbic circuit ကိုတလျှောက်လုံး pCREB နှင့် DeltaFosB ပွောငျးလဲ။ Mol Pharmacol ။ 2006;70: 2064-2074 ။ [PubMed]
Muller DL, Unterwald EM ။ D1 dopamine receptors ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းမော်ဖင်းအကိုက်အုပ်ချုပ်ရေးပြီးနောက်ကြွက် striatum အတွက် deltaFosB သော induction modulate ။ J ကို Pharmacol Exp Ther ။ 2005;314: 148-154 ။ [PubMed]
Nakabeppu Y ကို, Fos / Jun ကမှတ်တမ်းလှုပ်ရှားမှုဖြစ်စဉ်ကိုတားဆီးပေးပါတယ်ကြောင်း FosB ၏ Nathan ဃတစ်ဦးကသဘာဝကျကျဖြစ်ပေါ်ခြင်းကိုပုံစံ။ cell ။ 1991;64: 751-759 ။ [PubMed]
Nestler EJ ။ စွဲလမ်း၏မှတ်တမ်းယန္တရားများ: ΔFosB၏အခန်းကဏ္ဍ။ ဖီးလ်ဖြတ်ကျော် R ကို Soc လန်ဒန် B ကို Biol သိပ္ပံ။ 2008 စာနယ်ဇင်း၌တည်၏။
Teegarden SL, ဘေးလ် TL ။ အစားအသောက် preference ကိုနှင့်စားသုံးမှုအပေါ်စိတ်ဖိစီးမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများလက်လှမ်းမီခြင်းနှင့်စိတ်ဖိစီးမှု sensitivity ကိုအပေါ်မှီခိုဖြစ်ကြသည်။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2007;61: 1021-1029 ။ [PubMed]
Werme M က, Messer ကို C, Olson L ကို, Gilden L ကို, Thoren P ကို, Nestler EJ, Brene အက်စ် DeltaFosB ဘီးပြေးထိန်းညှိ။ J ကို neuroscience ။ 2002;22: 8133-8138 ။ [PubMed]